Nke a bụ oge iri nke ị na-agaghị efu oge gị. Mụọ na PowerPoint 2019 otu esi eji mbugharị na slide na ngalaba slide. Mmetụta dị oke ike nke na-enye ngosi gị ozugbo dị ka ọkachamara. Na ịgafe ị ga-enwe ike ịhụ ma ọ bụ nyochagharịa ụfọdụ ihe ndị bụ isi. Dị ka ịgbakwunye slide, itinye akara ngosi ma ọ bụ wepụ okirikiri site na onyonyo. Mmetụta dị na ndị na-ege gị ntị bụ nke ekwe nkwa.
Jiri zooms na PowerPoint 2019 Jenụwarị 3rd, 2021Tranquillus
GỤỌ Asambodo iru eru ọkachamara (CQP)
gara agaParallax mmetụta na PowerPoint 2019
-esonụNkwekọrịta mkpokọta: ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ na-agbanwe agbanwe na onye ọrụ na ezumike ezumike?
Inye nkwado a kapịrị ọnụ